Efa tena mivadika ny tany | NewsMada
Par Webmaster Two sur 19/02/2020
Mifanohitra tanteraka amin’ny maha olona sy ny foto-pisainana maha Malagasy ny zava-misy amin’izao fotoana iainantsika eto Madagasikara, eny maneran-tany mihitsy aza. Feno habibiana ny tranga rehetra heno sy hita etsy sy eroa. Tsy an-tanànan-dehibe tsy any ambanivohitra fa tena miova ny fisainan’ny olona.
Tsy matahotra fahafatesana intsony. Tsy misy alahelo sy fihetseham-po fa toy ny fanahim-biby, mifamono mahafaty sy mifamosavy am-pitoerana. Tsy lehibe tsy kely fa lasa fihetsika mahazatra izany fifamonoana izany.
Mahasadaikatra ny zava-misy amin’izao fotoana. Toa zary zavatra mandeha ho azy ny fahenoana fa nisy namono tamin’ny fomba mahatsiravina ny olona tatsy. Nisy nandrasarasa tamin’ny antsy ny olona tary.
Mampivarahontsana ny zava-miseho. Ny mpihavana, vady aman-janaka, iray tampo… aza lasa miray loha amina famonoana ny iray amin’ireo raim-pianakaviana ka mandevina izany an-tsokosoko noho ny fitiavan-tena sy tsy fahaizana mifandefitra. Zava-doza anie izany e! Kanefa dia mahasahy miseho masoandro ireo nahavanon-doza. Taiza teto Madagasikara rey olona no mbola nisy an’izany raha tsy amin’izao vanim-potoana iainantsika izao.
Tsisy vidiny intsony ny aina eto amintsika. Potika ny kolontsaina maha Malagasy, fihavanana no nololohavina an-tampon’ny loha hatramin’izay, kanefa indrisy…Tsy misy intsony izany ankehitriny.
Manginy fotsiny anie ireo tranga ahitana mpianaka mifamototra, raim-pianakaviana manolana ny zanany vavy, lahy samy lahy na vavy samy vavy mifanambady… misy ary efa manomboka miseho masoandro te hiteny aza hoe mety ny hataony. Tsisy rahateo ny sakantsakana fa fanomezana vahana aza no misy. Ny lehilahy te hiova ho vehivavy na vehivavy te ho lasa lehilahy fa tsy afa-po amin’ny natiora nametrahana azy. Efa tena mivadika ny tany, ny an-doha no lasa an-tongotra, izay no amehezana azy.